Tag: denda kupindura | Martech Zone
Tag: denda mhinduro
Quarantine: Inguva Yekuenda Kushanda
Chitatu, Kurume 18, 2020 Chitatu, Kurume 18, 2020 Douglas Karr
Uku ndiko, kupfuura kusahadzika, iyo isina kujairika bhizinesi nharaunda uye ramangwana risinganetseke randakaona muhupenyu hwangu. Izvo zvakati, ndiri kutarisa mhuri yangu, shamwari, uye vatengi vachipatsanurwa kuita matraki akati wandei: Hasha - izvi, pasina mubvunzo, zvakaipisisa. Ndiri kutarisa vanhu vandinoda uye vandinoremekedza mukutsamwa kungopopotera munhu wese. Haisi kubatsira chero chinhu kana chero munhu. Ino ndiyo nguva yekuva nemutsa. Kuoma mitezo - vanhu vazhinji vakamirira